Umbuzo omnye ekufuneka ubuzile kuphando lwakho olulandelayo | Martech Zone
NgoLwesine, Novemba 9, 2006 NgoMgqibelo, ngoMeyi 2, 2015 Douglas Karr
Umhlobo wam olungileyo uChris Baggott unento enkulu isikhundla namhlanje malunga nophando. Ndivumelana ngokupheleleyo noChris. Nceda ungandibuzi ingcebiso yam ukuba awuzukwenza nto ngolwazi. Nabani na ondaziyo uyaqonda ukuba ndiyathanda ukunika uluvo lwam… ngamanye amaxesha kwisiphoso. Abahlobo bam bayazi ngokuqinisekileyo ukuba banokundithemba.
Kukho izizathu ezibini zoku:
Ndingumntu onomdla kwaye mdala kakhulu ukuba ndingadlala imidlalo. Ndibona ukuba iwotshi iyangxama, kutheni ke ubetha ejikeleza ityholo!
Ukuba ndihlala ndithetha oko ndiyithethayo kwaye ndithetha oko ndikuthethayo, abantu baya kuhlala befumana ibali elifanayo kum. Bayazi ukuba andibaxeleli into ukuze bave into abayifunayo.
Kodwa… ukuba uyaqhubeka nokucela iingcebiso zam, undixelele ukuba uyayithanda, kwaye uqhubeke uyigxothe… andizukuchitha ixesha lam nawe kwixesha elizayo. Oko akutsho ukuba awukwazi ukungavumelani, ndihlala ndiphosakele. Ndithetha kuphela ukuba inkuthazo yakho kukundenza ndive ngathi ndiyaxatyiswa, andifuni ukuchitha ixesha lam kunye nawe. Kwaye andizukuyenza.
Uphando lunje. Andazi nakweyiphi na inkampani engazaziyo iindawo zentlungu kumthengi. Inyani yile yokuba uninzi lweenkampani zinabantu abaziqondayo zonke iingqaqambo zabathengi babo, izinto ezonwabelwa ngabantu, kunye nabantu abangakwaziyo ukuma. Ingxaki kukuba asizikhathazi ngokumamela de sikulungele. Yiloo nto kanye olu phando-lusitsho kumthengi wakho, "Kulungile, ndikulungele ukumamela… nceda undixelele into oyithandayo nongayithandiyo ngam."
Uphando kufuneka lujolise kugqithiso lwesikali. Kwicala lokuchaneka, imibuzo ebonakalayo enokubangela impendulo ilinganiselwe. Ukundibuza ukuba ndilinganise imbeko ye-concierge iyahlekisa. Wonke umntu uyazi ukuba i-concierge yakho ihloniphekile okanye cha. Ukundibuza ukuba yeyiphi ihempe endiyinxibayo ukuze ndikwazi ukulandela kwaye ndikuzisele enye intle. Ukundibuza ukuba ndiyayithanda i-A vs. B ingaphezulu… ngakumbi xa ubuyela kunye nale ndiyikhethileyo.
Kwelinye icala lesikali kubalulekile ngokulinganayo. Omnye umhlobo, uPat Coyle, wabelane nam ngebali kanye apho inkampani ibinombuzo omnye kuphela kuvavanyo lwabo…
Inyani yile yokuba umntu kwinkampani yakho uyazi ukuba yintoni enokuphuculwa. Banokoyika ukuyithetha. Okanye basenokungathengi ukuthenga. Okanye, rhoqo kunangoku, bayazi ukuba ayizukulungiswa, kutheni uzikhathaza. Ukuba awuyi kubamamela abasebenzi bakho, amathuba okuba awuyi kubamamela abathengi bakho.
Uphando lukwangumxhesho 'wokuxhasa' iinkolelo zakho. Xelela umphathi izinto eziphezulu ezili-10 ekufuneka bazilungisile ngokusekwe kuphando lwakho kwaye ngamanye amaxesha ugxothwa nje njengegeza. KODWA… unike iisampulu ezingamakhulu ambalwa ezingahleliwe ezivela kubathengi bakho abaxhasa izinto ezili-10 eziphezulu, kwaye ngequbuliso abantu bayamamela. Akubuhlungu oko? Ndicinga njalo!
Andikukhuthazi ukunqunyulwa konxibelelwano nabaxhasi bakho. Ngokuchasene noko, nditsho ukuba FOCUS kunxibelelwano nabaxhasi bakho. Uphando alukho unxibelelwano. Akunqabile ngeendlela ezimbini. Yeka ukwenza. Vumela abasebenzi bakho bakuxelele into ethethwa ngabathengi kwaye bayilungise.
Kwaye ukuba unomdla wokwenene malunga nokuba abathengi bakho bacinga ntoni ngawe, umbuzo omnye ulula wanele:
tags: uphando lwabathengiuphando olunye lombuzosurveyimibuzo yophando
Juni 7, 2016 ngo-3: 34 AM